Jingye dia mpanamboatra matihanina. Tongasoa eto hitsidika ny orinasa.
Inona ny teny fonosanao?
Amin'ny ankapobeny, ny milina dia ho raikitra amin'ny bracket, ary avy eo entanaedisiona amin'ny trondro.
Amin'ny ankapobeny dia maharitra 3 ka hatramin'ny 4 herinandro aorian'ny fahazoana ny vola aloanao mialoha. Ny fotoana fandefasana manokana dia miankina amin'ny entana sy ny haben'ny baikonao.
T / T mialoha, 50% toy ny petra-bola, ary vita 50% fandanjana mandanjalanja alohan'ny fandefasana.
Hasehonay anao ny sarin'ny vokatra sy fonosana alohan'ny andoavanao ny mizana.
Mizaha toetra ny entanao rehetra alohan'ny fanaterana ve ianao?
Eny, manana fitsapana 100% izahay alohan'ny fanaterana
Ahoana no ataon'ny orinasao momba ny fifehezana kalitao?
Ny kalitao no laharam-pahamehana. Manome lanja lehibe ny fifehezana kalitao hatrany am-piandohana ka hatramin'ny faran'ny famokarana izahay. Ny vokatra rehetra dia hivory tanteraka ary hosedraina tsara alohan'ny hametrahana azy amin'ny entana.
Fiantohana 1 taona.
Azonay atao ve ny tonga mpizara ao amin'ny firenenanay?
Miarahaba anao tokoa izahay! Ny antsipiriany bebe kokoa dia horesahina raha liana amin'ny maha-agents anay ianao.
Ahoana ny serivisy aorian'ny varotra?
Fanohanana haingana aorian'ny varotra. Ny vokatray dia manana antoka maharitra iray taona sy serivisy fizahana maharitra maharitra.